even - Synonyms of even | Antonyms of even | Definition of even | Example of even | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for even
Top 30 analogous words or synonyms for even
ဓမ္မပဒ 56. Not very far goes the fragrance of flowers, even that of rose-bay or of sandalwood; but the fragrance of virtuous people is supreme, reaching even to the abodes of the devas (gods).
ဓမ္မပဒ 58. Even as onaheap of rubbish thrown away by the side -
အရှိုချင်းလူမျိုး အရှိုချင်းလူမျိုးဟာ “a scattered people even as grass between bricks - ကွဲပြား ပျံ့နှံ့နေပြီး၊ အုပ်ကြား မြက်ပေါက်လိုတောင် ဖြစ်နေတယ်” လို့ နားလည်လွဲခံရ ဖူးပါတယ်။ ( Burma Baptist Chronicle – page 345 ) အရှိုလူမျိုးရဲ့ သဘာဝက ထူးခြားတဲ့အတွက် ဒီလို နားလည်လွဲရတာ ဖြစ်သလို၊ အရှိုလူမျိုးကို သေချာစွာ မလေ့လာလို့လည်း နားလည်လွဲကြတာပါ။ အမှန်တော့ အရှိုလူမျိုးဟာ အုပ်ကြားမြက်ပေါက် မဟုတ်ပဲ၊ Cushion – “ကူရှင်” လို လူမျိုးတမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကူရှင်ဆိုတာ အထိအခိုက်မခံတဲ့ အရာ၊ ကြေကွဲလွယ်တဲ့ အရာတွေရဲ့ကြားမှာ ထားတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အခုအခံပါ။ ကူရှင်ဟာ ပင်ကိုယ်က တန်ဖိုးရှိလှတယ်လို့ မထင်ရပေမယ့်၊ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ အရာတမျိုးပါ။ အရှိုချင်းလူမျိုးဟာ သူ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ရာ အရပ်တွေမှာရှိတဲ့ ပင်ကိုယ်သဘာဝ အလွန်ကွာခြားကြပြီး၊ အထိခိုက်မခံတဲ့ အချက်တွေရှိနေတဲ့ လူမျိုးတွေကြားမှာ ပြေလည်စွာနေထိုင်နိုင်သူ၊ စိတ်နေရိုးသား အေးဆေးသူ ဖြစ်ပါတယ်။